Umkhangeli, iiWills, iTrasti kunye neLungelo lokuThengisa iiNdawo- i-NJ & NY yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuTyhilwa, ukuKhuselwa kweZembali kunye nabameli beBanki
ikhaya / Umkhangeli, iiWills, iTrasti kunye neLungelo lokuNika iiLifa
NjengeGqwetha laseNew Jersey, siza kukunceda ukuba ufuna ukuphumelela uLingelo lokuBanga okanye ulungiselele umyolelo wakho ukuze usapho lwakho luthintele ukumangalela kwixesha elizayo.
Kwi-Ofisi yoMthetho kaPatel, Soltis, & Cardenas sinako ukunceda ngazo naziphi na iimfuno zakho zepropathi. Amagqwetha ethu anokukumela kwiingxabano malunga nentando kunye nethemba, ulawulo lwepropathi, okanye isimangalo esiqhubekekileyo kwi-Hudson County, Essex County, Union Union, Bergen County, Mercer County, Monmouth County, Morris County, Passaic County, Somerset County, okanye Middlesex County .
Yeyiphi eminye imicimbi yesiqhelo enokuthi ivele ngexesha lenkqubo yoKhetho?
Ngaba ndiyamfuna igqwetha lokuLawula okanye ukuFaka uLwazi?
Siyi-Full-service Probate Litigation kunye neFund Disputes Law Firm esekwe eJersey City, NJ ngaphesheya kwesitalato ukusuka Hudson County Surrogate
Imicimbi yokutsala (xa umntu eswelekile ngaphandle komyo)
Kuya kubakho ukhuphiswano (Ngaba intando leyo ingeniswe ngobuqhetseba, okanye ifunyenwe Impembelelo yeTyala?
Imiceli mngeni yeTestamente Entsha (Izizathu zokucel 'umngeni kumyolelo onjengokunqongophala kwezikhundla zokwenza umyolelo, enye yenziwa njalo njalo.)
Ukunyanzeliswa kokungalunganga / ukungaziphathi kakuhle (ngaba iTrasti okanye umabi wefa ubile kwilifa?
Ukukhutshwa okusisiseko (Chaza omnye umntu njengomgwebi kunye / okanye umntu obambeleyo.)
Ukugcina nokugada abanye
Izibongozo kunye neRhafu yeZibheno
Iimbambano zelifa (Xa wonke umntu engadibani ngamanye amaxesha ukuba negqwetha lisebenze njengompempe kuyafuneka.
Uvavanyo kunye nokusasazwa kweeasethi
Izenzo zeAccounting (sinayo i-CPA efundisa ezinye ii-CPA indlela yokuphatha amaxabiso.)
Iindidi zamatyala esiphathelene nabameli be-NJ ye-NJ yethu yokulinganisa ukubandakanya ubuqhetseba nobuqhetseba, Impembelelo ye-Undue kunye nokungabikho komgangatho weTestamente. Akuqhelekanga ukuba umntu ucinga ukuba ungumhlobo othembekileyo ukuba azame ukukusebenzisa xa bebona imali emgceni.
yethu Abameli beLand Estate kwisiXeko saseJersey zibonelela ngenkonzo ekumgangatho uphakamileyo kunye nokuphendula kwinkonzo nganye yabathengi. Imbambano yakho ngendlu ingasombululwa ngommangalelwano okanye ngothethathethwano kwaye nangayiphi na imeko, siya kulwela thina. Siyaqonda ukuba ukuphulukana nomntu esimthandayo kunokuba lixesha lokuhlawuliswa ngokweemvakalelo kwaye oku kongeza uxinzelelo olongezelelekileyo kuye wonke umntu. Sisebenzela ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu baphathwa ngentlonelo. Siziqwalasele iimfuno zakho njengabaxumi bethu, kwaye asizukuphulukana nawe njengomntu kunye nemeko ofumana kuyo. Ukuba ufuna uncedo malunga nokuthengisa iipropathi zepropathi leyo singakuqinisekisa ukuba ufumana ezona mali zepropathi kwaye sikhusele iiarhente ngokusebenzisa enye yethu NJ Iarhente yokuvala izindlu.
Igqwetha labameli eNew York naseNew York ngaphesheya kwiNdlu yeeNkundla e-Hudson County, NJ; I-Bergen County, NJ; kunye neKings County, NY.
Sinika iintlanganiso zesicwangciso-qhinga sokuqala simahla ukuya ngaphaya koko kufuneka kwenziwe noko sinokuncedayo. Sineeyure eziguqukayo zokuhlangana nawe emva kokuba uphumile emsebenzini, okanye ngaphambi kokuqala kosuku lwakho, okanye nangeempelaveki ukuba eli kuphela kwexesha onokuhlangana ngalo. Kuxhomekeka kwimeko, sinokuyiphatha imbambano yakho ye-probate ngokwemeko yemali yexesha likaxakeka, esithetha ukuba awuhlawulisi ntlawulo yomthetho ngaphandle kokuba siphumelele imbambano yakho.
Nxibelelana neofisi yethu ukuze uthethe negqwetha laseNew Jersey nokuba singakunceda njani (844) 533-3367 okanye usithumele nge-imeyile ku [Imeyile ikhuselwe].